Armenia Oo Xabad-joojin ku Baaqday Iyo Azerbaijan Oo ku Gacan-sayrtay. – Heemaal News Network
Ciidamada Armenia iyo Azerbaijan ayaa maanta oo Sabti ah sii wada dagaalkooda oo galay maalintii toddobaad ee uu ka socdo agagaarka gobolka Nagorno-Karabakh, iyagoo iska dhega tiray baaqyada caalamiga ah ee xabad joojinta.
Armenia ayaa Jimcihii sheegtay in ay kala shaqeyn doonto Ruushka, Mareykanka iyo Faransiiska dib u cusbooneysiinta xabad joojin ka hergasha gobolka Nagorno-Karabakh iyadoo tirada dhimashadu ay sare u kacday maalintii lixaad oo uu dagaal ka socda gobolkan gooni-u-goosadka ah ee dhaca Koonfurta Caucasus.
Azerbaijan, oo kula dagaalameysa xoogagga qowmiyadaha Armenia ee Nagorno-Karabakh, ayaan ka jawaabin baaqa xabad joojinta ee ay u direen saddexda dal ee sida wadajirka ah u guddoomiya Ururka Amniga iyo Iskaashiga ee Yurub (OSCE) Minsk Group ee dhexdhexaadinaya colaaddan.
Madaxweynaha Azerbaijan, Ilham Aliyev, ayaa Talaadadii meesha ka saaray in Armenia lagala hadlo arrimaha gobolka Nagorno-Karabakh, iyadoo Turkey oo xulufo la ah Azerbaijan ay Khamiistii ku dhawaaqday in saddexdan quwadood ee waaweyn aysan door ku lahayn nabadeynta.
Armenia ayaa sheegtey in caasimadda gobolka ee Stepanakert lagu bartilmaameedsaday duqeyn ay geysteen xoogaga Azerbaijan.
Masuuliyiinta gobolkan gooni-u-goosadka ah ayaa ka digay in “dagaalkii ugu dambeeyay” ee gobolka uu bilowday. Waxa Sabtida maanta ah ugu baaqeen beesha caalamka in “aqoonsiga madax-bannaanida” Nagorno-Karabakh ay tahay “habka kaliya ee wax ku oolka ah ee nabadda lagu soo celiyo.”
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in uu khadka taleefanka si is xigxiga kala hadlay ra’iisul wasaaraha Armenia, Nikol Pashinyan, iyo madaxweynaha Azerbaijan Aliyev, wuxuuna soo jeediyay qaab cusub oo dib loogu bilaabayo wadahadalka kooxda Minsk dhexdeeda.
Maxaa loo Hakiyay Dar-dar-galinta Shaqaalaha Caafimaadka Ee Awdal.?